Sida Ugu Macaan Ee Leefida cambarka gabdhaha iyo sida loo qanciyo xaaskaaga | shumis.net
Home » galmada » Sida Ugu Macaan Ee Leefida cambarka gabdhaha iyo sida loo qanciyo xaaskaaga
Sida Ugu Macaan Ee Leefida cambarka gabdhaha iyo sida loo qanciyo xaaskaaga
Leefida farjiga iyo dhuuqida xubinka raga ma jiri jirin waagii hore, sidaa daraadeed salafka kama hadlin mas’aladan, waxaa ugu horreyey qof tilmaamo leefidda farjiga caalim. Gabdho somaliyeed oo dibka dhiibtay – youtube devid lescot. Dhuuqida naasaha iyo dhuuqida cambarka naagta kee bay aad u jeceshahay, gabdhaha foorarsiga ma ku raaxaystaan.
Inay haweeneydu ninka kor fariisato iyadoo fiican ugu dhejinaysa bahalkeeda ninka bahalkiisa, qaababka kale naagaha badankooda kama helaan, naagaha qaarkooda. Waan salaamey farxiyo fiska.mida kale sln sare cabdi samad wlh waa riyadeyda ugu weyn aan noqdo sida farxiya oo kale.mida kale waxaan haya miro badan iyo heeso. Galmada naagaha buuran waxa ay bahan tahay nin gus
dheer waayo waxaa kaa reebaya cajaraha iyo hilibka. qaabka ugu fiican waa ay iyada fariisato guska iyadoo.
Title: Sida Ugu Macaan Ee Leefida cambarka gabdhaha iyo sida loo qanciyo xaaskaaga